Waxaa la soo saaray 49 taleefannada Huawei iyo Honor oo leh EMUI 9.1 | Androidsis
Faahfaahinta ugu horreysa ee ku saabsan EMUI 9.1 ayaa goor dhow la shaaciyay. Kani waa nooca cusub ee lakabka qaabeynta ee taleefannada Huawei iyo Honor. Dabool oo keena taxane cusub iyo kuwaas oo beta horay loogu sii daayay taleefannada qaarkood. In kasta oo liistada taleefannada casriga ah ee dhammaystiran ee marin u helay cusboonaysiinta ahayd qarsoodi. Nasiib wanaagse, shirkadda lafteedu mar hore ayey wadaagtay liiskan.
Wadar ahaan 49 taleefan oo u dhexeeya Huawei iyo Honor ayaa isku mid ah. Markaa waxay umuuqataa inay tahay liistada saxda ah ee taleefannada leh cusbooneysiintan EMUI 9.1 si rasmi ah. Wixii aan la siinin xilligan waa taariikhihii cusbooneysiinta. In kasta oo moodooyinka qaarkood ay horayba u bilaabantay.
Liisku aad buu u ballaadhan yahay. Intaa waxaa sii dheer, dhexdeeda waxaa jira taleefanno nooc ah oo aan la furin ama lagu wado in laga furo Yurub. Marka wax walba oo yar ayaa ku jira. Xusuusnow in kiiskan, cusbooneysiinta EMUI 9.1 waxay ka madax bannaan tahay Android. Markaa uma baahnid inaad haysatid Android Pie si aad uhesho nooca lakabka.
Liiska dhameystiran ee Huawei iyo Honor casriga ah ee marin u heli doona EMUI 9.1, sida ay xaqiijisay shirkadda lafteeda, waa sida soo socota:
Huawei Mate 10 RS Naqshadeynta Porsche
Huawei New 4
Arag sharaf 10
Huawei Nova 4aad
Huawei Nova 3aad
Huawei Ku raaxayso 9 Plus
Huawei Ku raaxayso 8 Plus
Huawei Ku raaxayso MAX
Huawei ku raaxayso 9S
Huawei ku raaxayso 7S
Huawei Ku raaxayso 9-aad
Huawei MediaPad M5 (noocyadeeda oo leh 10,8, 10,1 iyo 8 inji)
Waan arki karnaa intaas marka lagu daro taleefannada casriga ah waxaan sidoo kale leenahay kiniin kujira liistadaan. Marka kiniinku wuxuu sidoo kale marin u heli doonaa EMUI 9.1. Telefoonada ugu horeeya ee liiska horeyba waxay u heli karaan beta, sida ku xusan. Sidoo kale, xusuusnow in noocaan lakabka ah wuxuu la yimaadaa GPU Turbo la hagaajiyay.
Cusbooneysiinta ayaa dhici doonta bilaha soo socda. Taariikh lama siinin, maxaa yeelay waa wax ku tiirsan taleefan kasta. Laakiin bilaha soo socda waa inay si rasmi ah u dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Shaaciyey liiska taleefannada ku cusbooneysiin doona EMUI 9.1